गुमेको धन पाइने छ । तपार्इंको सोच अति राम्रो रहँदा रहँदै पनि अरुले आलोचना भने गर्ने छन् । स्थायित्व र विकासको लागि गरिने प्रयास पर्याप्त नभए पनि महत्व भने राख्ने छ । रमणीय स्थान भ्रमणको योग रहेको छ । आफ्ना कमजोरी सुधार गरी अरुमाथि पनि दवाव सृजना गर्न सकिने छ । तर समयको साथ साथै तपाईंमा केही नकारात्मक परिवर्तन पनि हुनेछन् जसले तपार्इंको प्रतिष्ठामा हानी पुर्याउने छ ।विवाद र अनेक दवावमा काम गर्नु पर्ला । स्रोतको उचित प्रयोग गरी भोलिको जीवनको वारेमा पनि सोच्ने बेला आएको छ । आर्थिक कठिनाइको अन्त्य हुनेछ । धार्मिक काम सिद्ध हुनेछन् । मातृभूमिको लागि केही गर्ने सोच राखिने छ ।
विशेष गरी ब्यापार, व्यावसायका लागि उत्तम रहने छ । आपसी भेटघाटले ठूलो प्रतिफल प्रदान गर्नेछ । सरकारी कामको लागि यो साता केही उत्तम रहेको भएपनि व्यक्तिगत कार्य भने सफल हुन गार्हो पर्नेछ । लामो दुरीको यात्रा योग रहेको छ । अनेक भागदौड हुनेछन् । काम अनुसारको दाम नपाइए पनि भोलिको लागि भने उत्तम रहने छ । समाजको लागि भने केही गर्ने सोच सफल हुनेछ । समाज परिवर्तनमा तपार्इंको निकै राम्रो भूमिका रहने छ । प्रतिस्ठित व्यक्तिको साथ पाइने छ । लामो समयको प्रतिक्षा स्वरुप बनेको कामले खुसी दिने छ । राम्रो कामको सिद्धि हुनेछ । तार्किक क्षमता उँचा रहने छ । विचारमा सात्विकता आउने छ । सबै कामको लागि राम्रो रहने छ । राजनीति क्षेत्र विशेष लाभ दिनेवाला छ ।
मातृभूमिको लागि केही गर्ने सोच बन्ने छ । पढाई, लेखाइ प्रति तपार्इंको नजर सकारात्मक हुनेछ । खेलकुद र साहसिक कामको लागि पनि यो साता शुभ रहने छ । केही दुबिधा र मानमर्दन हुनेछ काम पनि हुनेछन् । केही राम्रा काममा लगानी हुनेछ । व्यापारले पनि उत्तिनै राम्रो प्रतिफल दिनेछ । परिवारमा केही राम्रा विषयले चर्चा हुनेछन् । बोलीको भावी जीवनको समीक्षा हुनेछ । कर्तव्यको कारण तपार्इंको प्रतिष्ठा बढ्ने छ । काम गर्ने दुबिधा बन्ने छ । भेटघाट र भालाकुसारीले सार्थकता पाउने छ । बोलीको कारण भने विवादमा परिएला होस् गरेर बोल्नु होला । निकै चुनौतीको बीच बाट प्रगति दिनेवाला छ । कार्य क्षेत्र सम्बृद्ध हुनेछ ।
तपाईंका राम्रा कुराको सबैले प्रशंसा गरेपनि गलत कामको लागि कसैको साथ रहने छैन । भोलिको लागि तपाईंको विचार शुद्धता बनोस् भनेर केही गर्ने बेला आएको छ । धन सम्पत्तिको कुरामा विवाद आउला । इमान्दारिताको कदर हुनेछ । वादविवादबाट राम्रो निस्कर्ष निस्कने छ । सामाजिक काममा राम्रा अवसर पाइने छन् । यात्रा योग रहेको छ । आर्थिक कार्यको लागि भने त्यति सहज नहोला । तार्किक क्षमता उँचा रहने छ । लामो दुरीको यात्रा कस्टपूर्ण रहला । विवादका कारण मानसिक अशान्ति हुनेछ । तपार्इंको प्रगतिलाई देखेर रुस्ट हुनेहरु पाइने छन् । तर तपार्इंको लक्ष्यबाट बिचलित हुने योग भने छैन । धार्मिक र सामाजिक कामको लागि उत्तम रहने छ ।
पिडा र दवावमा गरेका कामले मानसिक तनाव हुनेछ । रोजगारीका अवसर पाइने छन् । परिवारमा केही राम्रो वातारण बन्ने छ । तार्किक क्षमताको कारण अरुको मन जित्न सफल भइने छ । न्यायिक काममा सोचेको भन्दा रामो समय रहेको छ । व्यक्तिगत स्वार्थ भन्दा अघि बढेर गरेको काम अति उत्तम रहने छ । माया, पिरतीमा सफल भइने छ । पढाई लेखाइ प्रति रुची बढ्ने छ । व्यक्तिगत प्रयासले समाजलाई फाईदा हुनेछ । जागिरमा पद बढ्ने योग छ । इच्छित कार्य ढिलै भएपनि पुरा हुनेछ । घरमा विद्वानजनको आगमन हुनेछ । मातृभूमि प्रति केही गर्ने सोच पुरा हुनेछ । पूर्वार्ध भन्दा अन्त्य सुखद रहने छ । मध्यमा भने सामान्य मात्र कार्य सिद्ध होलान् ।
आर्थिक सम्वृद्धिको साता रहने छ । कार्य क्षेत्र सफल बन्ने छ । भेटघाट र भलाकुसारीले तपार्इंको स्थिति अरु उँचा बनाउने छ । तपार्इंको प्रगतिलाई देखेर निरासा हुनेहरुका कारण मानसिक चिन्ता हुनेछ । लामो समयको प्रतिक्षा पुरा हुनेछ । वादविवादमा केही कुरा त्याग्न पनि तयार रहनु पर्नेछ । सार्थक कार्यमा तपाईंको साथ दिनेको खडेरी लाग्ने छ । क्रमशः कार्यमा केही बाधा आउने छन् । लामो वहसले सिर्जना गरेको निस्कर्ष मात्र दिगो हुनेछ । आर्थिक कार्य सफल हुनेछ । तपाईंलार्इ नराम्रो गर्नेहरु कमजोर रहने छन् । माया, पिरतीमा तपार्इंको स्थिति कमजोर रहने छ । तर सामाजिक काम तपार्इंको लागि लाभदायक रहने छ । पारिवारिक भ्रमण हुने योग छ ।
काम सम्पन्न गर्ने सिलसिलामा विवाद भए पनि मेहनत खेर जाने छैन। प्रतिफल हात पार्न प्रशस्त प्रयत्न गर्नुपर्ला,प्रलोभन देखाउनेहरूसँग सचेत रहनुहोला । सेतो रंगको पहिरनले सोचेजस्तै नतिजा दिनेछ,रचनात्मक कार्यबाट अरूको मन जित्न सकिनेछ । लगनशीलताले रोजगारीको मार्ग प्रशस्त गर्नेछ । मनोरञ्जक वातावरणमा रमाउन पाइनेछ ।प्रेमी–प्रेमिकासँगको सम्बन्धले निराश बनाउन सक्छ । चियोचर्चा गर्नेहरूसँग सावधानी अपनाउनुहोला ।
तपार्इंको कामको उचित मूल्याङ्कनले काम गर्ने हौसला बढ्ने छ । प्रगतिको लागि अवसरका उरुङ्ग लाग्ने छन्, तर अवसरको उचित प्रयोग गर्न बाट भने चुकिने छ । राम्रा अवसर प्राप्त हुनेछन् । इच्छित कार्य सिद्धिको लागि पनि यो साता मध्यम रहेको छ । सुरुमा केही राम्रा काम बन्ने छन् आफैलाई विश्वास नलागेका कुरा बन्दा आश्चर्य हुनेछ । कार्य क्षेत्रमा रमाइलो वातावरण छाउने छ । बोलीको कारण हुने ब्यापार शुभ रहने छन् । सौखिन कार्यको सिद्धि हुनेछ । आर्थिक क्रियाकलापमा तपार्इंको सहभागिताले सार्थक नतिजा पाउने छ । समयको गतिलाई चिनेर काम गर्दा सफल नै बनिने छ । केही रिक्समा काम गर्नु पर्ने समय छ । गएमा नराम्ररी जाने र आएमा निकै राम्रो आउने योग छ । समग्रमा यो साता उत्तम नै रहला ।
इस्ट मित्र काम लाग्ने छन् । तपार्इंको कार्यमा प्रभुत्व स्थापित हुनेछ । बोलीको कारण हुने ब्यापारले गति लिनेछ । ब्यापारमा महत्वपूर्ण लगानी योग रहेको छ। भ्रमण सार्थक रहने छ । आय र व्ययको स्थिति समान रहेपनि भोलिको लागि गरिने कामले गर्दा केही राम्रो परिणाम आउने छ । सुरुमा वादविवाद र मित्रबीच मनमुटाव रहने छ । सिजन अनुसार गरेको काम फस्टाउने छ । विद्या र वुद्धिको प्रयोगले तपाईंलार्इ अग्रणी बनाउने छ । साथी मित्र काम लाग्ने छन् । कार्य दक्षता बढ्ने छ । कार्य सिद्धिको अधिक सम्भावना रहेको छ । वादविवादको अन्त्य हुनेछ । मित्रको साथ पाइने छ । बोलीमा मधुरता देखिने छ । कार्य क्षेत्र सम्बृद्ध हुनेछ । बैदेशिक काम बन्ने छ । राजनीतिमा केही राम्रो अवसर प्राप्त हुने योग रहेको छ। मिस्रित फल दिनेवाला रहने छ ।
मित्रताले सार्थकता पाउने छ । बाधा व्यवधान हट्ने छन् । तपाईंप्रति अरुको नजर सुद्ध हुनेछ । बिचारेर गरेको काममा समस्या आएपनि अन्त्यमा सुल्झने छ । समय समयमा केही निराशाको बादल मडारिने भएपनि साताको अन्त्यमा त्यसको सुधार हुनेछ । सुरुको समय निकै प्रगति कारक समय रहने छ । पढाइमा प्रगति हुनेछ । ब्यापार फस्टाउने छ । जीवनको लागि केही महत्वपूर्ण काम सम्पन्न होला । मित्रको साथ पाइने छ । मध्यबाट यात्राको योग रहेको छ । अपरिचितको सहयोग पाइने छ । विचार नपुर्याई गरेको कामबाट पनि उत्तिनै फाइदा हुनेछ । बैदेसिक काम, संचार र यातायातका क्षेत्रमा काम गर्नेहरुका लागि उत्तम रहने छ ।
तपाईंका कमी, कमजोरीलार्इ लिएर फाइदा लिनेहरुबाट बच्नु होला । कार्यमा व्यस्तता बनिरहने छ । काम अनुसारको दाम पाउने कुरामा पनि पछिपरिने छ । तपार्इंको साथ दिनेहरु टाढा रहने छन् । बोलीको कारण भने उन्नत काम सम्पन्न गर्न सफल भइने छ । लामो यात्रा भ्रमण योग रहेको छ । सुरुमा गरेका काम असाध्यै उपलब्धिमुलक रहने छन् । क्रमशः ग्रहको कमजोर प्रभाव सुरु हुँदै जाँदा कार्यमा अपजस पनि भोगिने छ । विचारमा विषमता र कार्य क्षमतामा न्यूनता आउला । मध्यमा राम्रा कामको लागि यात्रा हुनेछ । आपसी तिक्तताले विश्वासको वातावरण कमजोर रहने छ । अन्त्यमा सोचेको भन्दा राम्रो अवसर प्राप्ती योग रहेको छ । विद्या, बुद्धिको सहि प्रयोग गर्न पनि उत्तिनै सफल भइने छ । रोजगारीका अवसर प्राप्त हुनेछन् । कार्य क्षेत्रमा नयाँ काम गर्ने वातावरण बन्ने छ ।
केही कमजोर सोच र विचारले तपार्इंलाई कुसंगतमा लाने खतरा छ । वैवाहिक जीवन विवाद रहित बन्न सक्ने छैन । आर्थिक कठिनाकोबीच पनि सोचेको काम बन्ने ग्रह योग रहेको छ । शुभारम्भमा घरमा शुभ काम सम्पन्न हुनेछ । प्रगतिको लागि निकै नै उपयोगी रहने छ । खेती कृषि कार्य नसोचेको प्रतिफल दिनेवाला छ । ब्यापारमा शुभ समय रहेको छ । प्रगतिको लागि राम्रो समय रहने छ । अरुलाई तल पारेर कुरा गर्ने सोच राखे आलोचित भइने छ । केही रचनात्मक काम सम्पन्न हुनेछ । विचारमा स्पष्टता र व्यवहारमा पारदर्सी बनिने छ । राजनीतिका लागि भने साता उत्तम रहने छ । अन्त्यमा भ्रमण हुने योग छ । लेनदेनमा आफूलाई फाइदा हुनेछ । विचार र व्यवहारले अरुलाई प्रभावित पार्न सफल भइने छ ।
कालसर्पयोग शान्ती !! ! कालसर्पयोग शान्ती !!!